महिनावारी बन्द हुने बेलामा देखिन सक्छन् यस्ता समस्या ! - Health TV Online
डा.बिना बस्न्यात 49 Views
महिलाको महिनावारी जब स्थायी रूपमा रोकिन्छ त्यस पछि महिला सन्तान उत्पादन गर्न असमर्थ रहन्छन । यस्तो अवस्थालाइ रजनोवृद्धि अर्थात मेनोपज भनिन्छ । सामान्यतया करिब ४५ दखि ५० वर्षको उमेरमा महिनावारी सुक्ने हुन्छ ।तर कहिलेकाहीं आ आफनो शारीरिक बनोट अनुसार उमेर तलमाथि हुनसक्छ । महिलाको महिनावारी सुक्ने बेलामा मासिकचक्रमा केहि परिवर्तनहरु आउने गर्छन । समयमा महिनावारी नहुने वा समय नपुग्दै महिनावारी हुने लगायतका विभिन्न समस्या देखिने गर्छ । महिनावारीमा क्रमिक रुपमा वा कतिपय अवस्थामा अकस्मात पनि रोकावट आउन सक्ने हुन्छ । यसरी मासिकचक्र निरन्तर रुपमा करिब १ वर्ष भन्दा बढि रोकियो भने त्यसलाई रजनोवृद्धि अर्थात मेनोपज भन्ने गरिन्छ।
यसलाई महिलाहरुको जीवनमा परिवर्तन भनेर समेत बझ्ने गरिन्छ। निरन्तर १ वर्ष सम्म रजस्वला रोकिएमा मात्र मेनोपज भएको मानिन्छ। कतिपय अवस्थामा ७, ८ महिना सम्म रोकिएर फेरि महिनावारी हुन जाने हुन्छ। यस्तो समस्या आउँदा चिकित्सकसँग परामर्श लिन जरुरी हुन्छ। रजनोवृद्धि पश्चात महिलामा विभिन्न प्रकारका शारीरिक एवंम मानसिक दुवै प्रकारका परिवर्तनहरु देखिन थाल्छन । महिनावारी सुक्ने बेलामा हर्मोनमा समेत कमी आउन थाल्छ जसले गर्दा हड्डी खिइँदै जाने लगायत विविध किसिमका शारीरिक समस्याहरु निम्तिन सक्छन । यसका साथै निम्न समस्याहरु निम्तिन सक्छन।
शारीरिक शिथिलता आउने
राती निद्रा नपर्ने
सानो काम गर्दा पनि थकान महशुस हुने
बढी झर्किनेबढी रिस उठ्ने
शरीरमा शक्ति कम हुने
बढी गर्मी महशुस हुने
शारीरिक सम्पर्कमा रुचि नहुने
महिनावारी सुक्नु भनेको महिला एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्नु हो त्यसैले पनि यो बेला हर्मोनको गडबढी हुनुलाई स्वभाविक मानिन्छ । र केही समस्याहरु देखिन सक्छन्। यस्ता लक्षणहरुलाई सामान्य रुपमा हेरेर स्विकार गर्नुपर्छ । कतिपय महिलाहरु आफूलाई निकै हिन भावनाले हेर्ने गर्छन । तर यसलाई बेलैमा बुझ्न जरुरी हुन्छ । यसरी प्रजननक्रियाको अन्त्य हुँदा विभिन्न प्रजनन अंग समेत हर्मोनले असर गर्ने गर्छ । प्रजनन शक्ति हराउने हुँदा महिलालाई खिन्न महशुस हुने गर्छ । तर यो नियमित चक्र हो भनेर बुझ्न जरुरी छ ।
महिलाहरुमा मासिकचक्रमा आउने गडबडीका कारण डिम्बासय र स्तन क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ । महिलाहरुमा महिनावारी रोकिएपछि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर जस दीर्घरोग लाग्ने सम्भावना पनि बढेर जान्छ । समसामयिक समस्याको पहिचान र दीर्घकालीन जटिलताहरुलाई मध्यनजर गर्दै एक जोखिमको प्रमुख, कारण केहो जान्न जरुरी हुन्छ ।कहिलेकाहीं सामान्य तवर भन्दा कम उमेरमै रजनोवृति आउन सक्ने हुन्छ। जसमध्ये धुमपान पनि प्रमुख कारक मान्ने गरिन्छ।
मेनोपज भनेको प्राकृतिक प्रकृया हो । यसलाइ प्रत्येक महिलाले ठुलो समस्याको रुपमा लिन हुँदैन । महिलाहरुले मेनोपज हुँदा आउने विभिन्न खालका समस्याहरुलाई बुझ्न र स्विकार्न जरुरी हुन्छ। तसर्थ यो हुनु भन्दा पहिला देखि नै शारीरिक व्यायाम गर्ने, शारीरिक रुपमा आफूलाई व्यस्त राख्ने , खानपानमा ध्यानदिने, पोषणयक्त खानेकुरा जस्तै दुध, माछा मासु पनिर, हरिया सागसब्जी फलफूल खाने गर्दा मानसिक तथा शारीरिक रुपमा पनि मेनोपजका लागि तयार हुन सकिन्छ।
डा. बस्न्यात स्त्रीराेग विशेषज्ञ हुन्।